Ihe ntụgharị Motorola One Vision nwere Exynos 9609 pụtara | Androidsis
Filtered niile àgwà na oyiyi nke Motorola One Vision na perforated ihuenyo
El Motorola Otu ọhụụ bụ ngwaọrụ gam akporo One nke Motorola na-esote, nke Lenovo. Ekwentị na-adọrọ mmasị nke ukwuu n'ihi na processor na-enye ya ike.
Oge nke a, ụlọ ọrụ ahụ anaghị eso Qualcomm ma ọ bụ MediaTek's Snapdragon SoCsMa na Samsung's Exynos chipset. Na, n'oge a, nkọwa ndị ọzọ na nsụgharị ọhụrụ apụtala banyere ekwentị, nke na-abịakwa na ihuenyo perforated.
Na mbụ kọrọ na Motorola One Vision bụ nke Exynos 9610 kwadoro ya, mana akụkọ ọhụrụ sitere na Winfuture kwuru na Chipset bụ n'ezie Exynos 9609. A na-ekwu na SoC a bụ ihe nrụpụta isi asatọ dị ka Exynos 9610, mana ọ na-agba ọsọ elekere dị ntakịrị (2.2 GHz na 2.310's 9610 GHz). Enweghị akwụkwọ gọọmentị na SoC, yabụ anyị enweghị ike ịnye nkọwa ndị ọzọ.
Exynos 9609, dabere na ihe anakọtara, jikọtara ya na ya 4GB nke RAM na 128GB nke nchekwa gbasaa maka ụdị ekwentị nke Europe.
Enwekwara nkọwa ọhụrụ metụtara igwefoto. Motorola One Vision ga-enwe igwefoto n'azụ abụọ Ihe mejupụtara igwefoto isi 48 MP nwere oghere f / 1.7 na nkwụsi ike onyonyo yana ihe mmetụta nke abụọ 5 MP.
Dị ka isi iyi, mobile ga-enwe ọnọdụ ọhụụ abalị raara onwe ya nye ka ịse foto ka mma na gburugburu ọkụ dị ala. Ọ ga-enwekwa ọnọdụ igwefoto pụrụ iche maka ndekọ dị ka ihe nkiri yana ndekọ 4K 30fps yana ndekọ 1080p 60fps.
The Motorola One Vision ga-enwe perforated ihuenyo dị ka Galaxy A8s. N'ime oghere dị na panel ahụ bụ igwefoto 25 MP (f / 2.0) selfie.
Motorola One Vision leak na-ekpughe ihe mmetụta 48 MP, ngosipụta 21: 9 na ndị ọzọ
Winfuture gosi na ekwentị nwere a Ihuenyo 6.3-inch LCD nwere FullHD + mkpebi nke 2,520 x 1,080 pikselụ yana akụkụ nke 21: 9. Nke a bụ otu akụkụ dị ka ekwentị ọhụrụ. Xperia 10 na Xperia 10 Plus sitere na Sony. Agbanyeghị, ịgaghị enweta ekwentị ogologo pụrụ iche ka One Vision tụrụ 160.1 x 71.2 x 8.7 millimeters.
Nkọwa ndị ọzọ gụnyere batrị 3,500mAh nwere ngwa ngwa TurboPower, njikọta NFC, Bluetooth 5.0, na Wi-Fi abụọ.
N'ikpeazụ, A na-atụ anya na Motorola One Vision ga-amalite Mee 15 na Brazil nakwa na ọ dị maka ịzụta n'echi ya na Europe. Enweghị okwu gbasara ọnụahịa ka, mana a kọwapụtara na ndị na-azụ ahịa mbụ na Europe ga-enweta otu ekweisi nke Motorola's Verve, na-erekarị € 130.
(Isi mmalite: 1 y 2 | Via)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Filtered niile àgwà na oyiyi nke Motorola One Vision na perforated ihuenyo
Black Shark 2, mmetụta mbụ nke anụ ọhịa egwuregwu a
Google Pay anaghị arụ ọrụ nke ọma na gam akporo Q beta